Tsiambaratelon’ny fahatezana :: Mitantara ny mbola fahavitany mamelon- tena ity ramatoabe, 105 taona • AoRaha
Tsiambaratelon’ny fahatezana Mitantara ny mbola fahavitany mamelon- tena ity ramatoabe, 105 taona
Mifanantitra amin-janaka aman-jafy araka ny fiteny tokoa Razafimalala Razafimbola na I Bebe Ralala. Feno 105 taona izy amin’izao fotoana izao. Nivelona tamin’ny fambolena sady tsy mbola miankin-doha velively amin’ireo taranany. Mizara ny tsiambaratelon’ny fahatezany I Bebe Ralala. Resahiny ihany koa ny andavanandrom-piainany, ao anatin’izany fahavitany mamelona ny tenany izany.
Faniriana ny ho ela velona saingy vitsy no mahatratra zato taona mahery. Tsy lavitra fa eto an-drenivohitra no misy vehivavy iray milomano ao anatin’ny sangodim-piainana nefa efa mihoatran’ny zato taona: izy no Razafimalala Razafimbola na i Bebe Ralala. Araka ny filazany dia «tsy tsaroany ny fanoratana ny daty nahaterahany tamin’ny fotoan’androny». Na izany aza, tany amin’ny taona 1914 tany no nahaterahany araka ny voasoratra ao amin’ny karapanondrony.
Mpamboly ny asa fiveloman’i Bebe Ralala taloha. Ankehitriny, tsy mba misedra zava-tsarotra mpahazo ny beantitra loatra ny tenany. Niaina toy ny olon-tsotra rehetra niray tanàna taminy izy. Niasa tany, niady tamin’ny fiainana, nianjadiam-pahoriana ihany koa… Tsy voazavan’ny fianakaviany mihitsy ny antony nampiavaka azy ka nahatonga an-dramatoabe ho nanana tombon’andro lava manokana toy izao. Manana ny valin-teniny kosa i Bebe Ralala.
Mipetra-drery eny Mandrosoa Ivato i Bebe Ralala. Mbola salama tsara izy hatreto ary tsy mba taizana aretina mihitsy. Mifidy sakafo izy mba hahatonga azy ho salama lalandava. Anisan’ny tsiambaratelo maha ela velona azy ny fihinana legioma tsy mitsy taharo simika na poizina (araka ny filazany azy).
“Ny fihinanana vokatra misy pozina (akora simika) no mampateza andro iainana ahy tahaka izao. Mampatanjaka ahy koa ny tsy fihinanana sakafo be menaka loatra. Marefo ara-batana ny olona amin’izao fotoana izao noho ny fihinanana vokatra misy pozina. Misy an’izany avokoa anefa hatramin’ny vary sy anana ary izay rehetra ambolena eny an-tsaha. Vokany, tsy misy tratra antitra intsony olona, hany ka na vao mananika ny faha-25 taonany fotsiny aza dia efa misy maty”, hoy izy mizara ny tsiambaratelo maha ela velona azy.
«Mbola afaka mihinana izay tiany izy ary tsy misy afaka mametra ny sakafony na efa antitra aza izy. Ny vary sosoa kosa no tena tsy tiany», hoy Rasolo, zanany faralahy, 79 taona. Tahaka ny olon-dehibe hatrany no itondrana azy ao amin’ny fianakaviana.
Tsy mba mpandeha dokotera i Bebe Ralala. Indray mandeha ao anatin’ny taona izy no mizaha fahasalamana any amin’ny mpitsabo, araka ny nambarany. “Tsy dia tia mandeha dokotera loatra aho. Izaho ihany no mitsabo ny tenako raha sendra misy tsy fihetezana kely. Maka an’ireny bozika sy ravinkazo ireny aho, tenehana dia avy eo evohako. Ampy mahasitrana ahy izany”, hoy
Midina any antsaha
Mahavariana ny andavanandrom-piainan-dRazafimalala Razafimbola. Mifoha vao maraina izy. Mividy mofo sy dite ary mihinana tsara an’ireo avy eo. Mialoha an’izay, raisiny amin’ny tanany roa ny sakafo na zavatra hafa isaky ny mihinana izy ka misaotra sy miantso ny anaran’Andriamanitra.
“Mipetraka maka aina kely aho rehefa avy misakafo maraina. Izaho ihany no mibango ny voloko sy mampiakanjo ahy satria mbola mahita tsara ny masoko”, hoy izy. Manao ny asa fanaony isan’andro i Bebe Ralala, aorian’ izay. Midina any antsaha izy manara-maso an’ireo voliny. Mijery an’ireo fananany hafa, toy ny trano amboarina indray izy, rehefa miakatra avy any an-tsaha.
“Rehefa migadona ny amin’ny 12 ora antoandro dia misakafo izy. Misy fotoana izy aty aminay no mihinana antoandro na anaterana any an-tranony satria efa tsy dia mahavita mikarakara irery intsony izy”, raha ny nambaran-dRasolo zanany.
Olona mavitrika tsy tia mipetrapetraka i Bebe Ralala. Manohy asa fambolena izy, na amin’izao taonany izao aza. Amboleny avokoa na voankazo (kaky, paoma, pibasy…) na legioma. Fahazarany ny mivarotra an’ireo vokatra avy any an-tsaha izay nokolokoloiny ireo
rehefa tonga ny fotoam-pamokarana. Mamelatra latabatra kely eo amin’ny toerana vory olona izy dia eo no mipetraka miandry mpividy. “ Miteny daholo izay mahita azy fa tsy tokony hiasa mafy intsony na hamizan-tena amin’ny fivarotana, saingy tsy ekeny izany ”, hoy indray Rasolo.
“Fahafinaretako ny mankany an-tsaha mijery voly. Tiako ny mitazona angady ka tsy hisy hahasakana ahy. Tsy misy hamelona ahy mihitsy raha mitorevaka fotsiny eto ny tenako”, hoy izy. Mampanaram-po azy amin’iny lafiny iny moa ny fianakaviany satria tsy mba tian’i Bebe ny mano­hitra an’izay zavatra tiany atao. Marihina fa anisan’ny mampidi-bola an’ity ramatoabe ity ny fananany tanimbary lehibe sy trano mihofa maromaro eny an-tanànany.
Nifanantitra amin-janaka aman-jafy
Niteraka mianadahy Razafimalala Razafimbola. Efa nodimandry ny zanany vavimatoa ary mbola velona kosa Rasolo, zanany faralahy. Naharay ny hafatra avy amin-dreniny itsy farany ka miezaka mampita izany amin’ireo taranany. “Nahatratra 120 taona vao maty ny renibeny, raha ny fitantarany taminay. Tsy fantatro na nifandovan’izy ireo ilay ela velona fa dia izy feno 105 taona izao”, hoy Rasolo.
Manodidina ny enimpolo sy roanjato ny fitambaramben’ny fianakavian’i bebe Ralala. Miisa dimy ambin’ny folo ny zafikeliny, raha
toa ka miisa roa amby valopolo ny zafiafy. Mahatratra ny zato mahery kosa ny zafindohalika ary miisa efatra ny zafikitrokeliny.
Notontosaina tamin’ny sabotsy 29 jona lasa teo ny fankalazana ny tsingerin-taona fahadimy amby zato taonan’i Bebe Ralala. Nanetriketrika ny fety. Nitanjozotra nihazo ny trano fonenan’i bebe ny taranany rehetra sy olona marobe miaraka amin’ireo mpitsoka mozika, ny maraina. Raikitra ny totorebika. Nandihy tamin’ireo hira tena ankafiziny, toy ny “Dia ilay fitia” izy sy Rasolo, zanany lahy.
Taorian’izay, niainga ny diabe niakatra namonjy teny amin’ny fasan-dRandriamalaza. Nangata-pitahiana sy tso-drano teo amin’io toerana manan- tantara io i Bebe. Randriamalaza moa dia mpanjaka nanana ny naha izy azy teny amin’ny faritra Antehiroka iny fahiny. Noentina nitety ny tanàna i bebe, taorian’izay. Nitaingana posy niaraka tamin’ny zafikitrokeliny tiany indrindra izy. Posy dimy hafa sy olona marobe manodidina ny fitonjato isa no nitandahatra taoriany. Nifarana teo amin’ny tranompokonolona Mandrosoa Ivato ny diabe.
Nitohy tamin’ny fiarahana misakafo ny fotoana. Namono omby iray sy akoho amam-borona an-jantony ny fianakaviana mba hamalifaliana an’ireo taranany sy ny mpiray tanàna amin’i Bebe Ralala. Nofaranana tamin’ny alim-pandihizana ho an’ny daholo be kosa ny fankalazana ny fahadimy amby zato taonan’i Bebe Ralala.
Baolina kitra – CAN 2019 :: Hifandona amina ekipa tsy mbola nandresy mazava ny Barea